MUUQAAL – Codkasoomaalida.com
Category: MUUQAAL	Axmed Biif oo laga joojiyay Bandhig Faneed uu ku qaban lahaa Muqdisho-VIDEO	Fannaanka Axmed Cabdikariin Biif ayaa laga joojiyay bandhig faneed uu xalay ku qaban lahaa Magaalada Muqdisho.
Author adminPosted on January 1, 2017Categories Featured, MUUQAAL, WARARKA	Erayada qaldan ee maalin kasta lagu isticmaalo warbaahinta –VIDEO	Axmed Faarax Cali Idaajaa ayaa ka warramay erayo badan oo qalad ah oo maalin kasta oo warbaahinta lagu isticmaalo, kuwaasi oo sida uu sheegay sii dili kara Afka Soomaaliga. Idaajaa ayaa sharraxaya kuwa ay yihiin erayadaas.
Author adminPosted on December 25, 2016Categories MUUQAAL, WARARKA	Gabar dalbaneysa in la doorto Farmaajo -Sabab	Author adminPosted on December 18, 2016Format VideoCategories Featured, MUUQAAL	Arin mucjiso ah oo ku dhacday qoys ku dhaqan magaalada Burco -Video	Qoyska oo ku dhaqan magaalada Burco ayeey soo food saartay arin dadka oo dhan ka yaabisay kaddib markii cunto kasta oo ay karsadaan isku badallayaan midabo kala gadisan.
Qoyskan ayaa markii ay gurigii waxba ka cuni kari waayeen waxay qaylo dhaan u dirsadeen culimadda magaaladda Burco si ay quraan ugu akhriyaan uguna soo duceeyaan iyagoo u maleeynaya in arintani tahay mid jin xiriir la leh.
Author adminPosted on December 18, 2016Categories MUUQAAL, WARARKA	Xanuunnada dadka ku dhacay Waqtiyada qaboobaha	Author adminPosted on December 17, 2016Format VideoCategories Featured, MUUQAAL, WARARKA	Search for: